Uhlalutyo olungathandekiyo oluvela kwi-FDA
ezaposwa ngomhla Oktobha 28, 2019 by UCarey Gillam
Kwinyanga ephelileyo uLawulo lokutya kunye neziyobisi lupapashe uhlalutyo lwamva nje lonyaka yamanqanaba entsalela yokubulala izitshabalalisi engcolisa iziqhamo kunye nemifuno kunye nokunye ukutya thina maMelika esihlala sikubeka kwiipleyiti zethu zokutya. Idatha entsha yongeza kwinkxalabo yabathengi ekhulayo kunye nengxoxo yezenzululwazi malunga nokuba iintsalela zamayeza okubulala izitshabalalisi ekutyeni zinganegalelo njani - okanye hayi - kwizigulo, kwizifo nakwiingxaki zokuzala.
Ngaphezulu kwamaphepha angama-55 eedatha, iitshathi kunye neegrafu, ingxelo ye-FDA “yeNkqubo yokuHlolwa kweNdawo yokuBulala izinambuzane” ikwanika nomzekelo ongathandekiyo kwinqanaba apho amafama ase-US athe athembela kwizibulali zinambuzane zokwenziwa, imingxunya yokubulala iintsholongwane kunye namayeza okubulala ukhula ekukhuliseni ukutya kwethu.
Umzekelo, sifunda ingxelo yokugqibela, ukuba imikhondo yezibulali zinambuzane yafunyanwa kwiipesenti ezingama-84 zeziqhamo zasekhaya, kunye neepesenti ezingama-53 zemifuno, kunye neepesenti ezingama-42 zeenkozo kunye neepesenti ezingama-73 zokutya ezibhalwe nje enye. ” Iisampulu zathathwa kwilizwe liphela, kubandakanya eCalifornia, Texas, Kansas, New York naseWisconsin.
Phantse iipesenti ezingama-94 zeediliya, ijusi yamagilebhisi kunye neerasentyisi kuvavanywa intsholongwane njenge-99 pesenti yamaqunube, iipesenti ezingama-88 zama-apile kunye nejusi yeapile, kunye neepesenti ezingama-33 zeemveliso zerayisi, ngokweenkcukacha ze-FDA.
Iziqhamo kunye nemifuno engenisiweyo eneneni ibonakalise ukwanda okuncinci kwezibulali zinambuzane, kunye neepesenti ezingama-52 zeziqhamo kunye neepesenti ezingama-46 zemifuno evela phesheya kuvavanyo oluqinisekileyo lweziyobisi. Ezi sampulu zazivela kumazwe angaphezu kwama-40, kubandakanya iMexico, iChina, i-India kunye ne Canada.
Siphinde sifunde ukuba kwisampulu esandula ukubikwa, phakathi kwamakhulu ezibulala zinambuzane ezahlukeneyo, i-FDA ifumene umkhondo we-DDT yokubulala izinambuzane ekuthinteleni ixesha elide kwiisampulu zokutya, kunye ne-chlorpyrifos, i-2,4-D kunye ne-glyphosate. I-DDT inxulunyaniswa nomhlaza wamabele, ukungachumi kunye nokuphuma kwesisu, ngelixa i-chlorpyrifos -enye inambuzane-ibonakalisiwe ngokwesayensi ukuba ibangela iingxaki ze-neurodevelopmental kubantwana abancinci.
I-Chlorpyrifos iyingozi kakhulu kangangokuba iGunya loKhuseleko loKutya laseYurophu licebise ukuvalwa kwemichiza eYurophu, ukufumanisa ukuba kukho akukho nqanaba lokukhuseleka ngokukhuselekileyo. Amayeza okubulala ukhula 2,4-D kunye glyphosate Zombini zinxulunyaniswa nomhlaza kunye nezinye iingxaki zempilo ngokunjalo.
Thailand kutshanje ithe iyavalwa I-glyphosate kunye ne-chlorpyrifos ngenxa yomngcipheko osekwe ngokwesayensi kwezi zinambuzane.
Ngaphandle kokuxhaphaka kwezibulala-zinambuzane ezifumaneka kukutya kwase-US, i-FDA, kunye ne-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) kunye neSebe lezoLimo lase-US (i-USDA), bathi iintsalela zemichiza yokubulala izinambuzane ekutyeni ayinanto yakwenza nokukhathazeka. Ngexesha lokuphembelela okunzima ngumzi mveliso wezolimo i-EPA ixhase ukusetyenziswa glyphosate kunye neklorpyrifos kwimveliso yokutya.
Abalawuli baphinda amazwi abaphathi beMonsanto kunye nabanye kwimizi-mveliso ngokunyanzelisa ukuba iintsalela zezitshabalalisi azisongeli kwimpilo yabantu ukuba nje amanqanaba ohlobo ngalunye lwentsalela ewela phantsi kwenqanaba "lokunyamezelana" elibekwe yi-EPA.
Kuhlalutyo lwakutsha nje lwe-FDA, kuphela iipesenti ezi-3.8 zokutya kwasekhaya ezinamanqanaba entsalela abonwa njengaphakamileyo ngokungekho mthethweni, okanye "eyaphula umthetho." Ngokutya okungeniswe elizweni, iipesenti ezili-10.4 zokutya okwenziwe kwisampulu zazisephula umthetho, ngokwe-FDA.
Oko i-FDA ingazange ikuthethe, kwaye zeziphi iiarhente zolawulo ezikuphepha ukuhlala zithetha esidlangalaleni, kukuba amanqanaba okunyamezelana kwezibulali zinambuzane ezithile sele enyukile kule minyaka njengoko iinkampani ezithengisa izibulali zinambuzane zicela imida ephezulu nangaphezulu yomthetho. I-EPA ivume ukonyuka okuvunyelweyo kwintsalela yeglyphosate ekutyeni, umzekelo. Kananjalo, iarhente ihlala yenza isigqibo sokuba ayifuni kuthobela imfuneko yomthetho ethi i-EPA "iyakufaka umda okongeziweyo ophindwe kalishumi wokhuselo lweentsana nabantwana" ekumiseni amanqanaba asemthethweni kwiintsalela zezibulali zinambuzane. I-EPA igqithisile le mfuno kuseto lokunyamezelwa kwezibulali zinambuzane, isithi akukho mda wokhuseleko okhoyo uyafuneka ukukhusela abantwana.
Eyona nto iphambili: Ukunyuka kwe-EPA kuseta "ukunyamezelana" kuvunyelwe njengomda osemthethweni, kokukhona kunokwenzeka ukuba abalawuli kuya kufuneka banike ingxelo ngentsalela "yokuhlukumeza" ekutyeni kwethu. Ngenxa yoko, i-US ihlala ivumela amanqanaba aphezulu entsalela yokubulala izitshabalalisi kukutya kunamanye amazwe aphuhlileyo. Umzekelo, umda osemthethweni wokubulala ukhula i-glyphosate kwi-apile zii-0.2 iinxalenye ngesigidi (ppm) e-United States kodwa sisiqingatha kuphela selo nqanaba-0.1 ppm-esivunyelwe kwi-apile kwi-European Union. Kananjalo i-US ivumela intsalela ye-glyphosate kwingqolowa nge-5 ppm, ngelixa i-EU ivumela kuphela i-1 ppm.
Njengomda osemthethweni wokunyuka kwentsalela yokubulala izitshabalalisi ekutyeni, uninzi lwezazinzulu ziye zanda ngokwanda malunga nemingcipheko yokusetyenziswa rhoqo kweentsalela, kunye nokusilela kolawulo lokuqwalaselwa kweempembelelo ezinokubakho zokusebenzisa uluhlu lweegciwane kunye nababulali bokhula ngaso sonke isidlo .
Iqela lezenzululwazi zaseHarvard bafuna ukuba uphando olunzulu malunga nokunxibelelana okunokubakho phakathi kwezifo kunye nokusetyenziswa kwesibulali zinambuzane njengoko beqikelela ukuba ngaphezulu kwe 90 pesenti yabantu eUnited States banazo iintsalela zamayeza okubulala izitshabalalisi kumchamo nakwigazi labo ngenxa yokutya ukutya okune-pesticide. A isifundo edibene neHarvard yafumanisa ukuba ukuvezwa kwento yokubulala izinambuzane ngaphakathi kuluhlu “oluqhelekileyo” kunxulunyaniswa zombini neengxaki zabasetyhini zokukhulelwa nokubeleka abantwana abaphilayo.
Izifundo ezongezelelekileyo zifumene ezinye iingxaki zempilo ezibotshelelwe kukutya okuchaseneyo nokubulala izitshabalalisi, kubandakanya ne-glyphosate. I-Glyphosate sesona sisibulala-ntsholongwane sisetyenziswa kakhulu kwihlabathi kwaye sesona sithako sisebenzayo kwi-Roundup yaseMonsanto kunye nezinye iimveliso zokubulala ukhula.
Icandelo lamayeza okubulala izitshabalalisi libuyisele umva
Kodwa njengoko inkxalabo inyuka, amahlakani eshishini lezolimo abuyela umva. Kule nyanga iqela labaphandi abathathu abanobuhlobo obude kunye neenkampani ezithengisa izitshabalalisi zezolimo bakhuphe ingxelo efuna ukuthomalalisa iinkxalabo zabathengi kunye nokuphelisa uphando lwenzululwazi.
Ingxelo, eyakhutshwa nge-21 ka-Okthobha, wathi “abukho ubungqina obungqalileyo benzululwazi okanye bezonyango obubonisa ukuba ukubhencwa okuqhelekileyo kwabathengi kwiintsalela zezibulali zinambuzane kubangela nayiphi na ingozi kwimpilo. Idatha yentsalela yamayeza okubulala izinambuzane kunye noqikelelo lokubonisa lubonisa ukuba abathengi bokutya bafumanekile kumanqanaba entsalela yokubulala izitshabalalisi engaphantsi kwemilinganiselo yezempilo. ”
Ayothusi into yokuba ababhali abathathu bengxelo basondelelene kakhulu nomzi mveliso wezolimo. Omnye wababhali bengxelo nguSteve Savage, ishishini lezolimo umcebisi kwaye Owayesakuba ngumqeshwa waseDuPont. Omnye nguCarol Burns, owayesakuba sisazinzulu seDow Chemical kunye nomcebisi wangoku weCortevia Agriscience, ukususwa kweDowDuPont. Umbhali wesithathu nguCarl Winter, uSihlalo weSebe lezeNzululwazi ngezoKutya neTekhnoloji kwiYunivesithi yaseCalifornia eDavis. Iyunivesithi ifumene phantse I-2 yezigidi ngonyaka Ukusuka kumzi mveliso wezolimo, ngokomphandi weyunivesithi, nangona ukuchaneka kwelo nani kungakhange kubonwe.
Ababhali bayise ingxelo yabo ngqo kwiCongress, bebambe iintetho ezintathu ezahlukeneyo eWashington, DC, eyilelwe ukukhuthaza umyalezo wabo wokhuseleko lwezibulali zinambuzane ukuze zisetyenziswe “kumabali okhuseleko lokutya kwimidiya, kunye neengcebiso zabathengi malunga nokutya abathengi (okanye abangafanelekanga) bakutye.”
Iiseshoni zokubulala izitshabalalisi zabanjwa kwizakhiwo zeofisi zamalungu eCongress kwaye, kubonakala ngathi, kwikomkhulu CropLife Melika, lobbyist kwishishini lezolimo.
Ukutya kwengqondo, Pesticides ulimo, umhlaza, abantwana, EPA, FDA, ukutya, ziqhamo, glyphosate, impilo, eziphilayo, inambuzane, inzululwazi, strawberries, USDA, imifuno